Ciidamada Gaashaan oo saaka soo gaba gabeeyay howl galkii Pizza House | STAR FM SOMALIA
Home Wararka Ciidamada Gaashaan oo saaka soo gaba gabeeyay howl galkii Pizza House
Ciidamada Gaashaan oo saaka soo gaba gabeeyay howl galkii Pizza House
Qarax xooggan oo xalay fiidkii ka dhacay nawaaxiga labada maqaayad ee Posh Treats iyo Pizza House ayaa geystay khasaare aad u fara badan, iyadoo markii dambena ay gudaha maqaayadda Pizza House galeen dabley hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab.
Dableyda hubeysan iyo ciidamada ammaanka ayaa muddo saacado ah ku dagaalamayay gudaha maqaayadda, isla markaana howl galka inuu dheeraado sababay maqaayadda oo aheyd mid mugdi ah, kooxdii gudaha u gashayna ay ku dhuumaaleysanayeen.
Maqaayadda Pizza House ayaa waxaa saaka laga soo saaray meydadka lix gabdhood oo labo ka mid ah ay isla dhasheen, kuwaasoo xalay lagu dilay gudaha Maqaayadda.
Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka, waxaana qoraal ka soo baxay oo laga aqriyay idaacada afkooda ku hadasha lagu sheegay inay weerareen Maqaayadda Posh Treats oo aheyd maqaayad lagu caweeyo oo ay ka shaqeeyan shaqaale ajnabi.
Previous articleQarax ayaa goor dhaw waxa uu ka dhacay agagaarka isgooska banaadir
Next articleMeydad laga soo saaray Maqaayadda Pizza, iyo khasaaraha weerarkii xalay oo kordhay(Daawo Sawiro)